कर्मचारीको तलव बढाउन सकिदैन– डा. कनोडिया – sunpani.com
सुनपानी । ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रवन्ध सञ्चालक डा. सुरेशकुमार कनोडियाले तत्काल कर्मचारीको तलव बढाउन नसकिने बताउनु भएको छ ।
कर्मचारीले केही दिनदेखि सुविधा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको बेला प्रवन्ध सञ्चालक डा. कनोडियाले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भएको हो । नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. कनोडियाले संस्था घाटामा चलिरहेको बेलामा कर्मचारीको तलव बढाउन नसकिने बताउनुभयो । ‘कोभिड र अन्य कारणले दुई वर्षदेखि मेडिकल कलेज घाटामा गइरहेको छ । त्यो पूर्ति गर्नका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ, डा. कनोडियाले भन्नुभयो, त्यसपछि तलव बढाउने विषयमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ ।’
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा स्थायी, करार र डाक्टर गरी एक हजार चार सय बढी कर्मचारी छन् । कर्मचारीले तलव बृद्धिलगायतका माग राखेर आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । प्रवन्ध सञ्चालक डा. कनोडियाले तलव बढाउने बाहेक सबै कुरामा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनका कारण अस्पतालमा भइरहेको अवरोधलाई हटाउन स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मेडिकल कलेजमा काम भन्दा पनि ठगेर खाने कर्मचारीहरु आन्दोलनमा अगाडि देखिने गरेको डा. कनोडियाको भनाई थियो । ‘३०÷४० जना छन् । जो नेतागिरी गर्छन् । उनीहरु काम भन्दा बढी राजनीति गर्छन्, डा. कनोडियाले भन्नुभयो, एक तिहाई तलव लिएर मान्ने भए उनीहरु घरमै बसे हुन्छ । म त्यो गर्न तयार छु ।’
मेडिकल कलेजका आर्थिक प्रशासन उपनिर्देशक श्याम शर्मा र अस्पतालका उपनिर्देशक डा. नितेश कनोडियाले दुई वर्षदेखि मेडिकल कलेजलाई आर्थिक भार थपिएको कुरा जान्दा जान्दै केही कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो । ‘उहाँहरुको माग अनुचित छ । पूरा गर्न सकिदैन, शर्माले भन्नुभयो, संस्थालाई बलियो बनाउनतिर लागौं । त्यसपछि सुविधाका कुरा गरौला ।’
प्रवन्ध सञ्चालक डा. कनोडियाले जति दिन कर्मचारीले आन्दोलन गरेर संस्थालाई घाटा पु¥याउँछन् त्यति नै उनीहरुको भत्तालगायतका सुविधा काटिने चेतावनी दिनुभयो ।